स्वास्थ्य पेजगर्भावस्थामा कसरी सावधानी अपनाउने ? - स्वास्थ्य पेज गर्भावस्थामा कसरी सावधानी अपनाउने ? - स्वास्थ्य पेज
गर्भावस्थामा कसरी सावधानी अपनाउने ?
गर्भावतीहरुको एउटै कामना हुन्छ, आफुले जन्माउने शिशु स्वस्थ र तन्दुरुस्त होस् । तर, कहिले काहीँ नसोचेको नतिजा आउँछ । गर्भबाट शिशुमा केही शारीरिक समस्या लिएर जन्मन्छन् । र, यसो हुनुमा गर्भावस्थामा गरिने कतिपय लापरवाही हुनसक्छ ।उसो भए कसरी सावधानी अपनाउने त ?
गर्भाधारणको योजना बनाउनुअघि पनि महिलाले शारीरिक जाँच गर्नु आवश्यक छ । तीन महिना पहिले सबै आवश्यक परिक्षण जस्तै थाइराइड, सिस्ट आदिको परिक्षण गराउनुपर्छ । साथै गर्भावस्थाको ३ महिना पहिले नै महिलाहरुले फोलिक एसिडको सेवन गर्नुपर्छ । फोलिक एसिडको सेवनले बच्चा र आमामा रगतको कमी हुँदैन र यसको कारणले पछि कुनै समस्या हुँदैन ।
गर्भावस्थाको क्रममा महिलाहरुलाई धेरै होहल्ला भएको माहौलमा रहनु हुँदैन । यसले बच्चाको सुन्ने शक्ति कम हुन सक्छ । एक अध्ययनको रिपोर्टमा यो कुरा अगाडि आएको छ कि ध्वनी प्रदुषणले गर्भमा हुर्किरहेको बच्चाको श्रवणशक्ति प्रभावित हुन्छ । यस्ता बच्चाको बोल्ने क्षमतामा पनि असर पर्छ किनभने बच्चाले जबसम्म केही सुन्दैनन् उनीहरुको उच्चारण गर्ने क्षमता विकसित हुँदैन ।
गर्भावस्थामा मदिरापान वा धुमपान एकदमै नराम्रो हो । यसले गर्भको शिशुमा प्रत्यक्ष हानी गर्छ । मदिराको पिउने लतले गर्भ तुहिन सक्छ वा भ्रुणको विकास रोकिन सक्छ । मदिराको कारणले बच्चाको व्यवहारमा पनि समस्या हुन सक्छ ।